Fanononana 30 hankalazana ireo olona niditra an-tsokosoko, voninkazo sy amboadia irery - Quotes
Fanononana 30 hankalazana ireo olona niditra an-tsokosoko, voninkazo sy amboadia irery
Ny fiaraha-monina maoderina dia matetika no nanary ny fahamendrehana, ny fidirana an-tsehatra ary ny fahamaotinana ho toetra tsy misy dikany izay mitazona ny iray tsy hahazo zava-dehibe amin'ny fiainana.
Saingy misy fiovana an-dranomasina mitranga ankehitriny, na dia miadana aza, izay manodina ny fiheverana sy manome lanja ny toetra voatokana kokoa .
izay nody nandeha mafy
Noho izany, ho fanajana ireo olona niditra an-tsokosoko, voninkazo ary amboadia mitokana any, dia namory ny sasany amin'ireo teny nalaina indrindra izay manazava ireo tombontsoa marobe amin'ny fitokana-monina sy ny toetran'ireo mankafy izany.
Ny ahy irery dia mahatsapa tena tsara, hanana anao aho raha toa ianao ka mamy kokoa noho ny mitokana ahy.– Warsan Shire
Kanto ny fahanginana, tsy mahasosotra. Ny fironana maha-olombelona matahotra zavatra tsara dia mahasosotra.– Elliot Kay
‘Mivoaha avy ao anaty akoranao’ - ilay fitenenana mampidi-doza izay tsy mahatakatra fa ny biby sasany dia manana fialofana voajanahary na aiza na aiza alehany ary misy ny olona mitovy. - Susan Kain
Sambatra ireo izay tsy matahotra manirery, tsy matahotra ny miaraka aminy, izay tsy mitady zavatra hatao foana, zavatra mampiala voly ny tenany, misy zavatra tsaraina.– Paulo Coelho
Ny olon-kendry miteny satria manana zavatra holazaina ry adala satria tsy maintsy miteny zavatra.– Plato
Rehefa irery aho dia afaka manjary tsy hita. Afaka mipetraka eo an-tampon'ny dongona tsy mihetsika toy ny fiakaran'ny ahi-dratsy aho, mandra-pahatongan'ny amboahaolo tsy miraharaha. Reko ny feon'ireo raozy mihira mihomehy.– Mary Oliver
Ny olona mangina no manana saina mafy indrindra. - Stephen Hawking
Ho an'ireo niditra an-tsokosoko, ny irery amin'ny eritreritsika dia mamelombelona toy ny matory, mahavelona toy ny mihinana.– Jonathan Rauch
Tena tiako ny mijanona ao amin'ny akaniko fa tsy mihetsika. Mandeha ao an-tsaiko aho, ary izany dia fepetra henjana amin'ny dia ho ahy. Ny vatako dia tsy dia liana loatra amin'ny fivezivezena amin'ny toerana hafa.– Bell Hooks
Indraindray aho dia nakatona fotsiny ary tsy niresaka tamin’olona nandritra ny andro maro. Tsy an'ny tena manokana izany.– Sonya Teclai
Irery foana no nahatsapa ho toerana tena nisy ahy, toy ny hoe tsy toetran'ny olona izany, fa efitrano iray ahafahako mihemotra lasa tena izy aho.– Cheryl Stray
Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny irery sy ny manirery. Mety ho manirery ianao amin'ny vondron'olona. Tiako ny irery. Tiako ny misakafo irery. Mody amin'ny alina aho ary mijery sarimihetsika fotsiny na miaraka amin'ny alika. Mila miezaka aho ary tena miteny hoe Andriamanitra ô, tsy maintsy mahita ny namako aho satria afa-po fotsiny aho.– Drew Barrymore
Ny fahanginana dia mampatahotra ny olona manao vava fotsiny.– William S. Boroughs
Ny manirery dia fahantrana mitokantokana irery no manankarena tena. - Mary Sarton
Lahatsoratra mifandraika (mitohy etsy ambany):
Fomba 15 mampifandray olona tsy mitovy amin'izao tontolo izao
Ny tena dikan'ny hoe mampiditra hevitra
Zavatra manan-danja 24 ianaranao rehefa mandany fotoana irery ianao
Toetra 10 fisaintsainana lalina
'Tsy manana namana aho' - Inona no hatao raha ianao ity
Fanononana 20 momba ny manirery izay hahatonga anao hahatsiaro ho irery irery
Misy hazakazaka roa eto an-tany. Ireo izay mila ny hafa, izay variana, variana ary mahazo aina avy amin'ny hafa, izay miahiahy, reraka ary tsy mahazo aina amin'ny fahirano toa ny fiakaran'ny vongan-dranomandry mahatsiravina na ny fiampitan'ny tany efitra ary ireo, etsy ankilany, izay reraky ny saina, mankaleo, menatra, reraky ny hafa tanteraka, raha mampitony azy ireo kosa ny fitokana-monina, ary mandroaka azy ireo am-pilaminana izy ireo. - Guy de Maupassant
Ny introverts dia mankamamy ny fifandraisana akaiky izay efa nivelatra tamin'izy ireo.– Adam S. McHugh
Mila irery matetika aho. Tena faly aho raha nandany ny asabotsy alina ka hatramin'ny alatsinainy maraina irery tao amin'ny tranoko. Izay no fameno lasantsy. - Audrey Hepburn
Irery, na tsy manao na inona na inona aza, dia tsy mandany fotoana. Manao, saika matetika, miaraka amin'ny orinasa ianao. Tsy misy fihaonana amin'ny tenanao afaka ho very maina tanteraka: Misy zavatra tsy maintsy hipoitra, na dia ny fanantenana indray andro aza hihaona aminao indray. - Emil Cioran
Ny fanirery anao dia ho fanohanana sy trano ho anao, na dia ao anatin'ny toe-javatra tsy mahazatra aza, ary avy amin'izany no ahitanao ny lalanao rehetra.– Rainer Maria Rilke
Aza atao ambanin-javatra aho fa mangina aho. Mahafantatra bebe kokoa noho izay nolazaiko aho, mieritrereta bebe kokoa noho ny miteny sy mandinika mihoatra ny fantatrao.– Michaela Chung
Nakatona tao anaty efitrano iray aho, lasa eran'izao tontolo izao ny eritreritro, ary tsy hita ny ambin'izao tontolo izao. - Criss Jami
Raha irery ianao dia anao irery. Raha miaraka aminao na dia mpiara-miasa aminao aza, dia antsasaky ny tenanao ihany na tsy dia arakaraka ny tsy fiheveran'ny fitondran-tenany ary raha manana namana mihoatra ny iray ianao dia ho latsaka ao anatin'ny toe-javatra iray ihany.
Andao hamafana zavatra iray: ny introverts dia tsy mankahala resaka kely satria tsy tia olona isika. Halantsika ny resaka kely satria mankahala ny sakana ateraky ny olona isika.– Laurie Helgoe
Mety kokoa noho ny telefaona ny mailaka. Raha ny fahitako azy dia hariako ny telefaoniko raha afaka miala amin'izany aho.– Tom Hanks
Tsy mankahala olona aho fa mahatsapa tsara kokoa rehefa tsy eo izy ireo.– Charles Bukowski
Izany resaka rehetra izany, ity fikaikisana heloka ity dia zavatra tsy noheveriko ho vitako mihitsy. Toa hadalana tamiko izany, toy ny atody tsy masaka nanapa-kevitra ny hivoaka avy ao amin'ny akorany: mety hisy ny fiparitahana lavitra loatra, ka hanjary puddle tsy misy endrika.– Margaret Atwood
Tsy hoe ny introverts dia tsy mpilalao ekipa mahay. Tsy mila ao amin'ny efitrano mitovy amin'ny ekipa sisa amin'ny fotoana rehetra fotsiny isika. Aleonay kokoa ny manana ampahany amin'ilay tetikasa nosokirina mba hialantsika aminy any amin'ny biraontsika, amin'ny fakana hevitra raha ilaina nefa miasa tsy miankina.- Sophia Dembling
Matetika dia mandalo ny andro manontolo raha tsy miresaka amin'ny olon-kafa aho.– Vincent Van Gogh
aleoko irery irery matetika
Hitako fa mahasoa ny mitokana amin'ny ampahany lehibe amin'ny fotoana. Ny miaraka amin'ny tena, na dia manana ny tsara indrindra aza, dia mandreraka sy manjavona tsy ho ela. Tiako ny irery. Tsy hitako mihitsy ilay mpiara-dia tamiko izay nahafinaritra ahy toy ny irery.– Henry David Thoreau
Miaina ao anaty irery aho izay maharary amin'ny fahatanorana, saingy matsiro amin'ny taona fahamatorana. - Albert Einstein
Iza amin'ireo teny nindramina ireo no tianao? Mametraha hevitra etsy ambany ary zarao amin'ny hevitra hafa ny hevitrao.
maka zavatra miadana amin'ny fiarahana mitanisa fifandraisana
ny fomba hanampiana olona mitomany
maninona aho no mitomany rehefa sorena aho
famantarana fa mahasarika anao ny fiteninao
ny fomba fanaovana fotoana haingana kokoa
ny fomba tsy hiraharaha firy ny hevitry ny olona
tia ahy any am-piasana ve izy